Cabdullaahi Yuusuf oo Xamar ka Degi Doona Siddeed Maalmood Guduhood...
"Waxaan u socdaa dalkii" C/lahi Yuusuf
Cabdullaahi Yuusuf, madaxweynaha Soomaaliya ee dalka dibadda kaga maqan ayaa sheegay in uusan wax baqdin ah ka qabin ammaankiisa marka uu isku dayo in uu dawladiisa u hoggaamiyo magaala madaxda aan qaanuunku ka jirin ee Muqdisho, muddo siddeed maalmood gudohho ah, sidaas waxaa warka ku bilaabay jariidada Telegraph ee ka soo baxda dalka Ingiriiska cadadkeedii Feb 13, 2005.
C/LAAHI YUUSUF AXMED , MDFKMG
"Waan hubaa in aysan jirin wax igu dhacaya, waxaan hadda ahay nin da'weyn, oo ah askari gaamurey. Weligay dagaal ayaan kusoo jirey, naftayda waxaan u hibeeyey dalkayga, mana cabsanayo" ayuu yiri Cabdullaahi Yuusuf oo toos ugu waramayey jariidada Telegraph asagoo jooga halka uu ka deggan yahay Nairobi ilaa markii loo doortay madaxweynaha DFKMG..
Jariidada oo hadalkeeda sii wadata waxa ay sheegtay in dad badan ay rumaysan yihiin in aragtida Cabdullaahi Yuuusfu ee ku noqoshada Muqdisho aysan caqli-gal ahayn, magaaladaas oo muddo ku dhow labaatan sano ay halakeeyeen carqaladuhu. Toddobaadkii hore ayey ahayd markii halkaas lagu diley weriye ka socdey British Broadcasting Corp.
Ilaa hadda madaxweynanimadiisu waxay hayd mid aan la mid ahayn kuwa kale. Guriga uu deggan yahay waa mid uu ka amaahday dawlad shisheeye, waardiyayaashiisu waa kuwo uu kasoo deynsadey hoggaamiye shisheeye, dadka gacan-yarayaasha u ahna waa kuwo aan awoodi karin in ay iska bixiyaan telefoonkooda. Taas oo jirta haddana waxaa loo arkaa rajada keliya ee ay Soomaaliya leedahay, ayey tiri jariidadu.
14 sano ka hor ayey ahayd markii maleeshiyo xoogooda isu geeyey ay xukunak ka tuureen madaxweynihii keligii taliyaha ahaa, Maxamed Siyaad Barre. Ilaa waqtigaas waxaa dalku kusii siqayey carqalad ay ku amar kutaagleeyaan qabqablayaasha dagaalku.
Sida ay sheegtay Telegraph, Madaxweyne Yuusuf waxa uu sheegay in uu dalka ku laabanayo muddo laba toddobaad gudohood ah, inkasta oo aysan muuqan ciidamo militari oo shisheeya ah oo gacan siinaya iyo calaamado muujinaya in qabqablayaasha dagaalku ay dagaal isu diyaarinayaan. "ma haysano boolis, militari ama ciidamo nabadda suga" ayuu yiri Madaxweyne Yuusuf, waxana uu intaas ku daray "Haddii aanaan helin gacanta beesha caalamka shaqada aan qaban doonaa waa adkaan doontaa, qofkasta taas waa ogyahay."
Shan wadan oo ka tirsan Afrikada Bari ayaa aqbalay in taageerayaan dib u celinta dawlada Soomaaliya, laakiin xaqiiqo ahaan dalka Uganda oo qura ayaa ku yaboohay ciidamo. "Waxaan diyaarineynaa ciidan anagu aan leenahay oo nabada suga" ayuu yiri Yusuf, asagoo intaas raaciyey ciidamaad shisheeye waxa keliya oo looga baahnaa waa in ay tababaraan ciidamada Soomaalida iyo in ay sugaan ammaanka meelaha dalka laga soo galo (Dekedaha iyo garnamada diyaaradaha).
"Ciidamada aan uga baahanahay wadamada kale ee Afrikaanka ah ma ahan kuwo loola jeedo in ay la dagaalamaan maleeshiyada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed" ayuu yiri cabdullaahi Yuusuf.
Isku daygii ciidamada shisheeye ee ugu dambeeyey waxaay ahayd markii xoogagii Qaramaad Midoobey ay Soomaaliya si waji gabax ah uga huleeleen sanadihii sagaashanaadkii ayey tiri Jariidadu.
Telegraph oo warkeedii sii wadata waxa ay tiri qayb ayaa ka cabsi qaba Mr. Yuusuf, oo qudhiisu ahaan jirey qabqable dagaal, in uusan nabad keenayn. Kaas oo xataa qaar lataliyayaashiisa kamid ah ay u yaqaanaan "nin halis ah" ahna hoggaamiye qallafsan. Waa sida jariidadu warka u dhigtaye.
Si kastaba ha ahaatee, ayey hadal keedii kusoo koobtay Telegraph, Madaxweynuhu wuxuu ku kalsoon yahay in uu heli doono taageero. Waxana uu yiri "In ka badan 90 boqolkiiba shacabku waxa ay rabaan nabad. Kuwa diidana waa dad xun, mana dhegeysaneyno kuwaas (nabada diidan)".
Tarjumadii: SomaliTalk.com | Feb 13, 2005